Cialis: Otu esi were ya na ole ka ọ na-aga | AASraw
/blog/Cialis , tadalafil/Cialis: Otu esi eji ya na oge ole ọ na-aga
Ihe na 10 / 13 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Cialis, tadalafil.
Olee otú ngwa ngwa Cialis na-arụ ọrụ na ogologo oge ọ na-adị
Ntinye ngwa ngwa Cialis
na-eme ngwa ngwa karịa ngwa ọgwụ ED ndị ọzọ, na mmalite nke irè n'ime oge 30. Ntuziaka bụ iji kpoo Cialis ntụ ntụ nkeji 30 tupu oge mmeko, mgbe na na Levitra, a na-agwa ndị ọrụ ka ha were 60 nkeji oge tupu ha enwee mmekọahụ. N'ozuzu, mmetụta nke 24 ikpeazụ na Cialis ruo 36 awa mgbe ọ nwụchara. Eziokwu ahụ bụ na mmetụta dị ogologo oge a bụ isi ahịa maka Cialis, nke mere onwe ya "ngwugwu izu ụka". Ọtụtụ ndị ikom dị ka ha nwere ike iji Cialis n'ehihie Friday, ma na-enwe mmetụta ụtụtụ Sunday. Ogologo oge Cialis na-eme ka o nwekwuo ohere ịme ka ọ ghara ịnabata ya ma ghara ịkọwa oge ọ ga-ewe.
Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ Abụọ Dị na Cialis
N'adịghị ka ndị na-asọmpi ya, Cialis nwere ọgwụgwọ abụọ dị iche iche. Enwere ike iburu ya na ihe dị mkpa, ma ọ bụ na ọ ga-ewere ya na ụbụrụ dị ala kwa ụbọchị. Na-eme ihe dị mkpa, ụdị ọgwụgwọ ahụ bụ 10 mg, ọ bụ ezie na ọ dị na 20 mg na 5 mg doses ma ọ bụrụ na 10 mg agbanweghị ịbụ ezigbo.
Mgbe a na-ewere ya dịka usoro iwu kwa ụbọchị, ọgwụ a tụrụ aro bụ 2.5 mg. E gosipụtara ọgwụgwọ Cialis kwa ụbọchị ka ọ dị irè iji melite arụ ọrụ erectile n'oge usoro ọgwụgwọ. Na usoro kwa ụbọchị, Cialis kwesịrị iji ihe dị ka otu oge kwa ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma. Ọ bụrụ na mg 2.5 adịghị arụ ọrụ nke ọma dị ka usoro usoro kwa ụbọchị, ndị dọkịta nwere ike ikwu ka a mụbaa ya na 5 mg kwa ụbọchị.
Ebee ịzụta ezi Tadalafil raw ntụ ntụ online?
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ isi iyi ntanetị, ma ọ siri ike zụta ezi Tadalafil uzuzu online. E nwere ọtụtụ ebe na-ere ngwaahịa ụgha na ahịa. ya mere, mgbe ị zụrụ Tadalafil uzuzu n'igwe, ị ga-ahọrọ otu ezigbo ala.
Tags: zụta Cialis ntụ ntụ, ịzụta tadalafil uzuzu, cialis ntụ ntụ, tadalafil uzuzu
Ogologo oge ole ka Cialis 20mg ga-arụ ọrụ?
Ogologo oge ole ka Cialis 20mg ga-arụ ọrụ?	Stanozolol- Top na-ere steroid maka bodybuilding !!!
Proviron (Mesterolone) ntụ ntụ